WunYan – Page 388
Posted on August 12, 2017 by whuk-46651
ရှောက်သီးတစ်လုံးကို အရည်ညှစ်ယူပါ။ ပြီးနောက် အခွံ၊ အစေ့၊ အရည် သုံးမျိုးလုံးကို ဇလုံတခု ထဲထည့်ပါ၊ဆား နည်းနည်းထဲ့ပြီး ပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေနွေးဖြူ ၂ လီတာ ခန့်ထည့်ပြီး အအေးခံပါ၊ နံနက် တကြိမ် အိမ်ရာဝင်တကြိမ် အကြမ်း ပန်းကန်လုံး တလုံးပုံမှန်သောက်ပါ။ ရက်ပိုင်းအတွင်းသိသိသာသာ ပျောက်ကင်းပါသည်။ အ၀လွန်သောသူများ သောက်ပါက နောက်ကြော ဇတ်ကြော မတက်တော့ခြင်း ၊ အမောခံနိုင်ခြင်း ၊…
Posted on August 11, 2017 by whuk-46651
ဒီနှစ်မှာ ဘွဲ့ယူကြတဲ့ ကျောင်းသား ထောင်ချီထဲမှာ Kimlan ကတော့ ထူးခြားနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံက အသက် ၉၁ နှစ် အရွယ် အဘွား တယောက်ဟာ ၁၀ နှစ်ကျော် ကြိုးစားပြီးနောက်မှာ တက္ကသိုလ် ဒီဂရီကို အရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Kimlan Jinakul အမည်နဲ့ အဲဒီ အဘွားဟာ ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ချင်ပေမယ့် ငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်ဘဝမှာ အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ပညာသင်ကြားဖို့ ဆိုတာမှာ…
Posted on August 9, 2017 by whuk-46651
အရက်သောက်သူတွေအတွက် ဂွေးတောက်ရွက်ကိုကြက်သားနဲ့ချက်စားမယ်ဆိုရင် အဆိပ်အတောက်ပြယ်စေပါတယ်။မန်မာ့ဆေးကျမ်းတွေမှာတော့ ဂွေးတောက်ရွက်ဟာ ဝမ်းမီးကိုတောက်စေပြီး ဓာတ်လေများကို ခိုင်မာစေတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သလိပ်ကိုကြေစေပြီး သွေးတိုးပွားစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကတော့ ဂွေးတောက်ရွက်ကို အသုံးပြုပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ အရွက်ကိုကင်ပြီး အနာကိုကပ်မယ်ဆိုရင် အနာစိမ်းတွေနဲ့ သွေးစုနာတွေ ပျောက်စေပါတယ်။ နုရင်ပိန်သွားမှာဖြစ်ပြီး ရင့်ရင်တော့ ပြည်ပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ အရက်သောက်သူတွေအတွက် ဂွေးတောက်ရွက်ကိုကြက်သားနဲ့ချက်စားမယ်ဆိုရင် အဆိပ်အတောက်ပြယ်စေပါတယ်။ ၃။ ကြော်စားမယ်၊ဟင်းခါးချက်သောက်မယ်ဆိုရင် လေထိုးလေအောင့်နဲ့ ဆီးချုပ်တာပျောက်ပါတယ်။ ၄။ အရွက်ကိုကြိတ်ပြီး…
ရပ်ထဲရွာထဲမှာတော့ဘေရောဂါတဲ့ အနောက်တိုင်းဆေးပညာရှင်တွေကတော့ သရက်ရွက်ကြီးတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီရောဂါဟာ ဌက်ဖျား ဖျားလို့လဲဖြစ်တတ်တယ် အသဲရောင်အသားဝါရောဂါ ဖြစ်ခဲ့ဘူးရင်လည်း ဘေကြီးလာနိုင်ပါတယ်(ဝါ) သရက်ရွက်ကြီးလာနိုင်ပါတယ် အဲလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဘယ်ဘက်နံရိုးအောက်မှာ အလုံအခဲကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီး လမ်းတောင်ကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်ပါဘူး အချို့ဆိုရင်အဲရောဂါနဲ့ပဲ သေသွားသူတွေဟာအများကြီးပါ ။ ကဲဘေရောဂါမန်းပေးဖို့ဆိုရင် တောပိန်းရိုးတချောင်းလိုပါတယ် လူနာရဲ့ခန္တာကိုယ်ကို ပတ်မှီတဲ့တောပိန်းရိုးကို ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ကတ်ကြေးနဲ့ဖြတ်ပြီးရင် လူနာရဲ့ဘယ်ဘက်နံအောက်မှာမထိတထိလေးထားပြီးတော့ “ဥုံနင့်ဘေ နင် အထက်ကိုပြန်ယူသွားဖွဟ” ဆိုတဲ့ဂါထာကို ခွန်နှစ်ခါအသက်အောင့်ပြီးမန်းပေးပါ။ ပြီးရင်အဲဒီပိန်းရိုးကို…
ဂျပန်အပြာမယ်လေးရဲ့ နောက်ကွယ်က သိပ်လှတဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခု
Posted on August 6, 2017 by whuk-46651
ဒီကနေ့မှာ သင်တို့ဖတ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးက သာမာန်ထက်ထူးခြားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးမို့ တစိမ့်စိမ့်၊ တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ ဖီလ်းလေးထည့်ပြီး ဖတ်ရှုပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံက အပြာကားလောကမှ မင်းသမီးလေးတစ်ဦး အကြောင်းဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးသတ်ပိုင်းလေးကလည်း ရင်နင့်ဖွယ်ရာပါ။ သူ့နာမည်ကတော့ Anna Tsukishima လို့ခေါ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံက AV Industry မှာတော့ လင်းလက်လာမယ့် ကြယ်ပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ရုရှား၊ အမေရိကန်နဲ့ ဂျပန်သွေးတွေ ရောယှက်ထားတဲ့သူမဟာ ထူးခြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်လေးတစ်ဦးလည်း…
ကြက်ဟင်း ခါးသီးဟာ အဓိကအားဖြင့် ရောဂါကြီး သုံးခုကို ကာကွယ် ကုသရာမှာ အထောက် အကူ ပြုပါတယ်. ၁။ ဆီးချို သွေးချိုရောဂါ ၂။ HIV ရောဂါ ၃။ ခုခံအားစနစ်နှင့် ပက်သက်သော ရောဂါများ (Immunological Diseases) များကို ကုသရာမှာ ထိရောက်တဲ့ အစားအစာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်. ဆီးချို၊ သွေးချို ရောဂါအတွက် ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာ…
Posted on August 1, 2017 by whuk-46651
လူတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ကို မိတ်ဆွေများအတွက် မျှဝေပေးထားတာပါ။ ဘယ်သူလဲတော့ နာမည်ပါမလာလို့ မသိရဘူး။ ခွေးလှေးယားသီးနက်စေ့က ဆေးစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ခံနေပါပြီ။ ဆေးအမျိုးမျိုး ဖော်ကြပါတယ်။ ထိုင်းမှာဆို အခုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်က တောင်ယာသမားများကို များများစိုက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကို ဖတ်ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဒေါက်တာခင်မောင်လွင်တို့ကိုယ်တိုင် ခွေးလှေးယားသီးရဲ့ ဆေးစွမ်းထက်မြတ်ပုံများကို ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဆေးစွမ်းထက်ရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း ရှိနိုင်တာ သဘာဝပါပဲ။ စားမယ်ဆိုရင်…